Misoro yeNhau, 05 Kurume 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Kurume 01, 2019
Vanhu vakawanda munyika votarisana nenzara sezvo gore rino goho richange risina kumira zvakanaka. America yabva yabvisa mamiriyoni gumi nemashanu ekushandisa mukutengera vanhu chikafu.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Kukadzi 28, 2019
Botswana inoisa mamiriyoni mazana mashanu ema Pula parutivi semari yekuti makambani ayo anoda kutanga mabhizinesi muZimbabwe, awane mari yekukwereta, kwete zviri kubuda mumapepanhau zvekuti Botswana yapa Zimbabwe mari yechikwereti ichashandiswa nemakambani akazvimirira muZimbabwe.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Kukadzi 26, 2019
Mutori wenhau, uye achiita zvemitambo, Samantha Kureya, uyo anozivikanwa nerekuti Gonyeti, anotorwa kumba kwake nemapurisa ndokuendwa naye kukamba yeHarare Central Police station, asi azoregedzwa achidzokera kumba kwake.
Misoro yeNhau, Muvhuro Kukadzi 25, 2019
Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika voshoropodza mashoko emutungamiri weMDC, VaNelson Chamisa ekuti vachaita kuti mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa vabviswe pachigaro zviri pamutemo kana vakasabvuma kuita nhaurirano nekukasika.
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Kukadzi 21, 2019.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Kukadzi 20, 2019
Gavhuna webhanga guru renyika, VaJohn Mangudya, vanoparura hurongwa hwemari vanhu vakawanda vachiti zvinhu hazvina kunyatsovajekera pahurongwa hwaturwa uhu.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Kukadzi 19, 2019
Dare reConstitutional Court rinoti kushandiswa kwemauto nemapurisa sevachuchisi vehurumende mumatare edzimhosva hazvisi pamutemo.
Misoro yeNhau, Muvhuro Kukadzi 18, 2019
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa vanomisa basa vakuru vemauto vana paine tarisiro yekuti vachapiwa mabasa ekumizinda yeZimbabwe kunze kwenyika..
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Kukadzi 15, 2019
Huwandu hwevanhu vanonzi vakafira kumugodhi weku Battlefields musi weChipiri manheru hunonzi hunogona kudarika zana hurumende ichiti yatara tsaona iyi sensational Disaster, izvo zvichaona mhuri yemufi wega wega achipihwa chiuru chemadhora negumbeze pamunhu wega wega.
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Kukadzi 14, 2019
Mutungamiri weMDC wekutanga, muchakabvu Morgan Tsvangirai, vanorangarirwa nhasi zvichitevera kushaya kwavo musi wa 14 Kukadzi gore rapera nechirwere chegomarara. VaTsvangirai vakashayikira muchipatara chekuSouth Africa.
Vashandi veCSC Votyira Mabasa Avo Kukambani Itsva yeBoustead Beef
Mvura Yotarisirwa Kunya Munzvimbo Dzakawanda muNyika
Chingwa Chotarisirwa Kukwira Zvakanyanya Svondo Rino
Sarudzo dzeMakanzura Dzinoitwa kuTsholotsho neHwedza
Mhirizhonga Inoitika paMuzinda weMDC muHarare